Ukujongana Ne-Spam Evam - Ziqhelise kwi-Semalt
Iibhokhwe azikho irekhodi elihle. Zikhawuleza kwaye ziphumele inaniiindwendwe zabantu kwiwebhusayithi. UMichael Brown, uMphathi weMveliso yabaPhezulu iSemalt ,uxwayisa ukuba i-bots ithola lula ukuloba iindawo ezinobungozi ngenjongo yokubahlasela, ukuxhamla iinkqubo zokuphawula, kunye nokubangelaukudideka kwiinkqubo zokunika ingxelo yeendlela. Ukunyuka kwezinto ezinobungozi kubangelwa ingxaki enkulu, kunye neentlobo zeGoogle zibonisaukuba ingxaki iphakama ngokukhawuleza.
I-Googlebot yinto enhle
Injongo ephambili yebhobho kukuzicwangcisa imisebenzi kwaye uzidibanise njengomvakatye. Baqhekezaikhowudi yomthombo, ukuqokelela idatha, nokwenza imisebenzi ekuphenduleni oko bakufumeneyo. Nangona kunjalo, ngoku kungathi le nto ivakalisa kakubi, akubona bonkeezimbi - купить роутер дешево. I-bot bot yenza i-presence yayo ibone kubasebenzisi kwaye inceda amawebhusayithi e-SERP. Ezinye i-bots zisebenzise oku kwaye zisebenziseAmacandelo e-intente engafaka eyenza ibonakale ngathi ivela kule bot.
Iingxongo ezimbi kunye nokuthunyelwa kogaxekile
Iingcambu ezimbi zibeka ingqungquthela kwiwebhusayithi yomxholo, uthathe ulwazi lomsebenzisi, nqakraza ubuqhetseba ngokusemthethweniiintengiso, kunye nokuhlawula iingxelo eziveliswe yi-Google Analytics. Into yokugqibela kuleluhlu ineempembelelo ezininzi kwiwebhusayithi. I ziphumoukusuka kwizicelo ezahlukeneyo ezinobungozi zokuthunyelwa kogaxekile. Ngokomzekelo, bayaphambukisa idatha yezithuthi kwi-inflation bayakha, bakhohliseabasebenzisi ukutyelela iisayithi ezibonakala kwiingxelo zeGoogle Analytics, ezivumela ukuba benze izixhumanisi zangemva. Ekubeni bafihlaizithuthi ezisemthethweni, zikwazi ukufihla abathumeli.
I-spam yokurhweba ine-100% ihlawula amazinga, kwaye ixesha elikhawulezileyo elikhawulezileyo, elisoloko lithengisaidatha kwiingxelo. Ngenxa yoko, umphumo wokuphela kwezi ngxelo ayivumelekanga. Kule minyaka, i-bots sele iqhutywe ngakumbi..
Abahlaseli basebenzisa iibhotile ukwenza ukuhlaselwa okukrakra. I-botnet yintanethi yamarobhothiokwenza kube nzima ukulandelela kunye ne-IPs ye-blacklist. Kuba nzima ukukhusela iwebhusayithi xa besetyenziselwa ukuKhatyelwa kweNkonzo yeNkonzo.Xa elinye likhupha okanye livimba enye, ezinye iindidi zikhula endaweni.
Uninzi lwamawebhusayithi ayenayo ikhowudi yeGoogle Analytics eneenkcukacha ezinzima kubo. UkudluliselwaI-bots iyakwazi ukukrazula ikhowudi ye-UA eyahlukileyo kwikhowudi yomthombo kwaye uyisebenzise ukulandelela isayithi. Ukususela ngelo xesha, kuya kubonakala ukuthumela ulwaziukuya ku-GA, ngaphandle kokutyelela. Basebenzisa iprotocol ye-Google Analytics Measurement Protocol, engacacaluli nayiphi na idatha ezayokuyo.
Ukuyeka ugaxekile omoya
Abasebenzisi banokunyamekela ukuthunyelwa kwezinto ezimbi kunye nokubuyisela intembeko yedatha esetyenziswe kwisithuthiiingxelo. Umhlalutye wegama lomninimzi yindlela enye malunga nale nto, njengoko iqinisekisa ukuba ithatha ingqalelo ulwazi kuphela kwiiwebhusayithi ezivumelekileyo. Ngaloo ndlelaimilinganiselo ekhoyo, zonke iindawo zokuthunyelwa kuzo, ukuhamba phambili, ingabonakali kwingxelo yokuhlalutya. Akusiyo isisombululo esisigxina, njengoko abahlaseli bafumanaumoya wee-counter measures ezenziwe.
Ukuthintela ukuBhekiswa koLuntu oluPheleleyo
Kwiimeko ezininzi, i-website yombiko wengxelo yi-bots ngokuzenzekelayo kwisayithi yazo. Oku kuninziilawulwa ngokusebenzisa iindlela zendalo zokuthintela ugaxekile. Ukuba umntu ukhetha ukusebenzisa i-Google Analytics, inqubo ingaba yinde kwaye iphelele. AnInkqubo yokukhusela ngokuzenzekelayo yi-Sucuri Website ye-Firewall, kunye nenketho yemithetho yesiko kumntu okhethwa ngumsebenzisi.
Inkulungwane ye-21 yaphakamisa imbambano yokhuseleko olutyhile. Ngamanye amaxesha uphazamisekilekufuneka ujongane nogaxekile. Nangona kunjalo, abantu kufuneka baqale ukujwayela ukuthatha amanyathelo ukuqinisekisa ukuba bayakhusela idatha yabo ngeendlela zonke.